Madaxii BBC-da Laanta Afka Soomaaliga Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay in uu xilkaas iska tagay
Madaxii BBC-da Laanta Afka Soomaaliga Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay in uu xilkaas iska tagay August 7, 2012 by Staff Reporter Leave a Comment (MOL) Madaxii BBC-da Laanta Afka Soomaaliga Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay in uu xilkaas iskaga tagay, wuxuuna intaa ku daray in uu ka qeybqaadan doono xasilinta iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Waxaan maanta ka ruqseystay BBC World Service oon u ahaa Madaxa Laanta Soomaaliga. Waxaan tegeyaa dalkeyga hooyo si aan uga qeyb qaato xasilintiisa iyo dib u dhiskiisa. Allow noo sahal ”ayuu Yusuf Garaad ku soo qoray Bartiisa facebook.
Yusuf Garaad ayaa lagu xusuustaa in uu buun-buuniyo wararka borobagaandada ah ama dacaayada u badan ee dowlada Itoobiya, waxaana ku farxi doona shaqada uu ka tagay dad badan oo aan jeclaysan sida uu u maamuli jirey idaacadda BBC-C da laanta Afka Somaliga.
Filed Under: Politics, Somalia, Warka Tagged With: Madaxii BBC-da Laanta Afka Soomaaliga Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay in uu xilkaas iska tagay Speak Your Mind Cancel reply